Ugboro ole ka ị na -edegara enyi gị ozi n'otu ụbọchị? - Mmekọahụ-Ịhụnanya-Ndụ
Ugboro ole ka ị na -edegara enyi gị ozi n'otu ụbọchị?
Enwere m ike ọ gaghị achọ karama Cristal ma ọ bụ akara ụbọchị na ụgbọ elu nkeonwe, mana m ka na-ewere onwe m dị ka nwa agbọghọ na-arụ ọrụ dị elu-na-ekwu maka teknụzụ, agbanyeghị. M na -ezigara enyi m nwoke ozi ihe dị ka otu ijeri ugboro n'ụbọchị, na o doro anya, nke ahụ bụ ihe mụ na AnnaLynne McCord nwere ike inwe ...
Ndị akaebe kwuru na 90210 starlet na Kellan Lutz kwụsịrị site na Nintendo DSi Studio ebe Chi ojiji hunk ji usoro egwuregwu XL na -agbagharị ka McCord na -eme onwe ya mma n'ọdụ ntutu na etemeete. Mana, n'agbanyeghị na ha nọ naanị obere oge, ha abụọ na -enwe mmekọrịta mgbe niile: 'McCord ga -enyocha Blackberry ya oge niile, na -ezipụ ozi ya na mma ya, onye nọ n'akụkụ nke ọzọ nke ụlọ ahụ, 'dịka Ndị mmadụ .
Ọ bụ naanị m na -ahụ ụdị mma a? OK, ọ dị mma- n'ezie mara mma? Ọ dịghị ihe dị ka ịbụ onye a kụrụ ihe nke na ị nweghị ike ịnọpụ iche. N’ezie, nke a abụghị ụzọ na-adigide ị ga-esi nwee mmekọrịta, mana na ihunanya nke ihunanya ọhụrụ, ọ mara mma nke ukwuu.
Achọpụtara m na m na -achọ izigara enyi m nwoke ozi obere ntakịrị na mgbada nke ụbọchị m, mana m kwụsịrị, iku ume wee ghọta na ya nwekwara ndụ na ọ chọghị ịnụ maka burrito m ma ọ bụ obere m. Iwu & Iwu maratọn.
Ugboro ole ka ị na -edegara fella gị ozi? Ọ na -adịgasị iche na mmekọrịta ahụ niile? Ị chere na ọ bụ nzuzu ide ederede mgbe ị nọ n'otu ọnụ ụlọ, dị ka AnnaLynne na Kellan?
Maka ihe ndị ọzọ na teknụzụ na ịhụnanya…
ka esi edozie isi okwu brassy
*Nka nke ozi ederede ihunanya!
*Ịnọ nkịtị gwụrụ? Lelee obere egwuregwu a m chepụtara akpọrọ Text Message Roulette!
*Ị na -a textụ ederede? Gụọ nke a, mụta ka esi akwụsị!
Ụzọ ndị ọzọ iji nweta ịma mma
Ị nwere ike merie $ 50,000 naanị maka ịdebanye aha ma ọ bụ banye na Glamour.com!
Debanye aha maka Glamour.com's Style Tips of the Week na Mma ndụmọdụ nke akwụkwọ akụkọ ụbọchị!
Tinye Glamour na ibe iGoogle gị .
Soro Glamour na Twitter .
ihe ọhụrụ ime mmekọahụ
ndò nke ntutu na -acha ọbara ọbara
otu esi arapara na poke